Madaxweynaha Soomaalida Itoobiya "goob shidaal laga helay buu shaqsi iska haystaa" - BBC News Somali
Madaxweynaha Soomaalida Itoobiya "goob shidaal laga helay buu shaqsi iska haystaa"
Donald Trump: "uma tanaasulayo Turkiga"
Posted at 18:39 3 Jul
Tebinta maanta oo Talaada ah waxaa idin la socodsiinayay Xasan Haybe iyo Mucaawiye Buraale
Posted at 17:13 3 Jul
Wasaaradda isgaarsiinta Soomaaliya oo warbixin kasoo saartay dhismaha ha'yadda isgaarsinta qaranka
Wasaaradda Boostada iyo Isgaarsiinta Somaaliya ayaa sheegtay in guul laga gaaray dhisidda hay’adda isgaarsiinta qaran oo oo loo sameeyey hay’ad maamul.
Wasiirka ayaa sheegay in dhismaha guddigan uu yimid muddo 6 bilood ah kaddib oo ay Wasaaraddu wada-tashiyo caddeymo leh la yeelanaysay dhinacyada uu sharcigu dhigayo.
Qaybahaasi oo kala ah dawladda, dhinacyada isgaarsiinta (sectorka), iyo xubno ka kala imanaya bulshada rayidka iyo bahda sharci-yaqaannada, si loo dhiso guddi dhammeystiran.
Posted at 16:26 3 Jul
Qof haween ah ayaa markii ugu horreysay noqotay duqa magaalada Tunis
Haweeney ayaa markii ugu horreysay loo doortay inay noqoto duqa magaalada caasimadda u ah dalka Tunisia ee Tunis.
Sucaad Cabdiraxmaan oo ka tirsan xisbiga Islaamiga ee Al-Nahdha ayaa sheegtay in waxqabadkeeda ugu horreeya uu noqon doono ka shaqaynta bilicda magaalada.
Guusha ay gaartay Sucaad waxaa soo dhaweeyay haweenka ku dhaqan dalka Tunisia.
Doorashooyinkii dowladda hoose ee bishii lasoo dhaafay ka dhacay Tunisia ayaa noqonaysa doorashadii ugu horreysay ee halkaasi laga qabto tan sannadkii 2011-kii uu kacdoon ka jiray dalkaasi.
Doorashada dowladda hoose ayaa lagu tilmaamay tallaabo muhiim ah oo ku gogol xaar u ah dhamaystirka howlaha dimuqraadiyadda Tunisia.
Posted at 14:57 3 Jul
Aabaha dhalay cayaaryahanka reer Nigeria Mikel oo la afduubtay sacaado ka hor cayaartii Argentina
Cayaaryahan John Obi Mikel wuxuu sheegay in dhacdada lagu afduubtay aabihiis ay dareen ku reebtay
Aabaha dhalay Captanka xulka qaranka Nigeria John Obi Mikel ayaa shaaca ka qaaday in loo sheegay in aabihiis la afduubtay muddo afar saacadood ah ka hor cayaartii dhexmartay Nigeria iyo Argentina, sida uu ku warramay wargeyska The Guradian
Pa Michael Obi ayaa lagu afduubtay koonfur bari dalka Nigeria xilliggaasi oo u ku wajahnaa munaasabad duug ah oo halkaasi ka dhacaysay.
Isniinti ayay booliska kasoo daayeen kooxihii afduubtay.
Aabaha Mikel wuxuu sheegay in la jirddilay haddana uu ku sugan yahay isbitaal.
Ma ahayn markii ugu horreysay ee la afduubto aabaha John Obi Mikel, sannadki 2011-kii ayay ahaydi markii sidan oo kale loo afduubtay.
Cayaaryahan Mikel ayaa sheegay in dhacadada lagu afduubtay aabiihis uu la wadaagay oo kaliya saaxibada ku dhaw balse ma uusan la wadaagin saraakiisha ka tirsan xulka qaranka Nigeria.
Posted at 14:32 3 Jul
Caro ka dhalatay haweeney isku soo sawirtay xayawaanka Geriga oo dhintay
Waxaa si wayn loo cambaareeyay haweeney u dhalatay dalka Mareykanka oo isku soo sawirtay xayawaanka Geriga oo dhintay.
Haweeneydan oo u gaarsata ah ayaa sawirka soo gelisay baraha bulshada xilli ay ku sugnayd dalka Koonfur Afrika.
SawirkaTess Thompson Talley ayaa kumanaan jeer lagu sii faafiyay baraha bulshada.
Waxay tiri “ Geriga aan u gaarsaday wuxuu kamid ahaa midka ku nool dalka Koonfur Afrika, tirada xayawaanka ayaa sii badanaya, ugaarsatada ayaa dadaal dheeri ah ku bixiyaa shaqada ugaarsiga”
USA Today ayaa soo xigtay qoraal ay soo gelisay Facebook oo markii dambe ay tirtay oo ahaa “ waxaa ii rumowday riyadeedii ahayd in aan mar wax u gaarsado, waxaan arkay xayawaanka Geriga ee naadirka ah”
Dadka baraha bulshada isticmaala ayaa su’aal geliyay sababta loo dilaya xayawaan adiigo ku jeesjeesaya.
Dagaal ka socda magaalada Baabili ee dalka Itoobiya
Dagaal xooggan ayaa la sheegayaa inuu ka socdo gudaha magaalada Baabili oo maamul ahaan hoos timaadda gobolka Oromada ayna wada degaan qowmiyadaha Soomaalida iyo Oromada.
Ilaa iyo hadda waxaa dagaalkaasi ku dhintay 6 qof dhaawac tira bandanna uu jiro waxaana burbur xooggan loo geystay huteellada iyo ganacsiga kale e ay Soomaalida ku lahayd magaalada baabili.
Maamulka deegaanka Oromada, kan Soomaalida iyo kan Federaalkaba kama aysan hadalin.
Posted at 12:53 3 Jul
Talyaaniga oo doonyo siinaya Liibiya
Xukuumadda Talyaaniga ayaa shaaca ka qaaday inay 12 doon ay siinayso Liibiya sii loo xakameeyo muhaajiriinta kusii qulqulaya dalalka Yurub.
Go’ankan ayaa imaanaya xilli dalalka Midowga Yurub ay ka wada hadlen sidii loola tacaali lahaa dhibaatada muhaajiriinta.
Ha’yadda socdaalka Adduunka waxay sheegtay in mukhalasiinta ay ka faa’idaysanayaan muhaajiriinta doonaya inay ka gudbaan Mediterranean-ka ka hotr inta aysan gaarin Yurub.
In ka badan 1,000 qof ayaa ku dhintay badda Mediterranean-ka sii ay u gaaraan Yurub.
Posted at 12:30 3 Jul
Salva Kiir oo loo soo jeediyay in sannooyin dheeraad ah uu Koonfurta Suudan sii xukumo
Madaxweynaha Koonfurta Suudaan Salva Kiir
Dowladda Koonfurta Suudaan ayaa soo jeedisay hindise-sharciyeed dhigaya in madaxweyne Salva Kiir uu xilka sii hayo saddex sanno oo dheeri ah.
Haddii sharcigan la meel mariyo, Kiir wuxuu xilka sii hayn doonaa ilaa sannadka 2021-ka, waxayna ka dhigantahay in 10 sanno uu xilka haynayo.
Mucaaradka ayaa cambaareeyay tallaabadan iyagoona sheegay in hindise sharciyeedkani uu kasoo horjeedo heshiiska nabadda.
Salva Kiir ayaa sannadkii 2015-kii saddex sanno ku darsaday muddada xilkiisa markaaso dagaallada ay sababeen in doorasho la qaban waayo.
Dalka Koonfurta Suudaan waxaa weli ka socda dagaallo inkastoo dhawaan heshiis xabad joojin ah ay wada gaareen hoggaamiyaha mucaaradka Riek Machar iyo madaxweyne Salva Kiir.
Posted at 12:13 3 Jul
Ra’iisul wasaaraha Itoobiya oo ugu baaqay shacabka inay joojiyaan dibadbaxyada isbaddallada lagu tageerayo
Posted at 11:56 3 Jul
Qoddobada aad ku maqli doontaan Idaacadda Duhurnimo
Posted at 10:53 3 Jul
Labo iyo toban wiil oo laga yaabo in ay bohol ku xayirnaadaan billooyin
Labo iyo toban wiil iyo tababarahoodii kubadda cagta ayaa iyaga oo nool ku xayiran bohol ku taalla Thailand, balse waxay u baahan yihiin in ay mukhuurta bartaan ama soo bixintoodu waxay qaadan doontaa billooyin maadaama oo ay daadad socdaan, sida uu milatarigu sheegay.
Kooxdan ayaa la la’aa sagaal maalmood, ka hor intii aysan warkooda soo helin dadka mukhuurta ku dheereeya oo ammin dambe oo Isniintii ah arkay iyaga oo ku sugan meel ingagan bohol gabigeed ah.
Qolyaha gurmadka degdegga ah ayaa la daalaa dhacaya in ay gaarsiiyaan waxyaabo dheeri ah oo ay u baahan yihiin kooxdaasi maadaama oo joogga biyuhu ay kor u sii kacayaan.
Waxaa laga yaabaa in ay u baahdaan in loo geeyo cuntadii ay isticmaali lahaayeen afarta billood ee soo socota, sida ay milatarigu sheegayaan.
Waxaa jira dadaallo lagu doonayo in nal iyo khad taleefan loogu xiriiriyo si la isugu dayo in wiilashu ay la hadlaan waaliddiintood, sida uu sheegay gafarnetooraha Chiang Rai, Narongsak Osotthanakon.
Tababaraha oo la sawiran qaar ka mid ah wiilasha bohosha ku xayiran
Posted at 9:52 3 Jul
Duqa Muqdisho oo nasakhay heshiisyadii lagu bixiyay Jardiinooyinka
Waxaa la nasakhay dhammaan heshiisyadii lagu bixiyay dhulka Jardiinooyinka ee magaalada Muqdisho, sida uu shaaciyay Duqa magaalada Muqdisho ahna Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Cismaan oo ku magac dheer Injineer Yariisow.
Dhulka jardiinooyinka ayaa ah dhul ay dawladdu u qoondaysay in ay magaaladu ku kala neefsato, shacabkuna ku nastaan oo indhaha u roon.
Dhulkaas ayaa ku kala yaala isgoysyo badan, balse maamulladii xukuumadda hadda jirta ka horreeyay ayaa shaqsiyaad ku wareejiyay.
Dhulkaas ayaa laga dhigtay, kaalimo shidaal, makhaayado iyo dhismeyaal.
Duqa Muqdisho ayaase hadda u qabtay muddo 30 maalmood ah si ay hantidooda uga daldashaan maadaama oo la joogo wakhti aad logu baahan yahay in bilicda magaalada la soo celiyo.
Yariisoow ayaa Twitterkiisa muuqaalkan soo dhigay.
Posted at 8:29 3 Jul
Madaxweynaha Soomaalida Itoobiya: "goob shidaal laga helay buu shaqsi iska haystaa"
Waxaa jira ceelal shidaal ah oo aysan wax war ah ka hayin Dawlad Deegaanka Soomaalida Itoobiya, sida uu sheegay madaxweynaha Cabdi Maxamuud Cumar.
Muuqaalkan oo baraha bulshada dhex socda ayuu madaxweynuhu ku qirayaa in uu jiro aag shidaal dhooban yahay oo uusan waxba kala soconin hawsha ka socota.
Isaga oo arrintaas ka hadlaya ayuuna yiri "gobolka Jarar oo cobole ah akabaabigeeda (waa eray Amxaari ah oo macnihiisu yahay agagaarkeeda) mid baa iska haysta Tewadhros la dhoho, mooji kaasu".
Madaxweynaha ayaa intaas sii raaciyay "haddase waa la isaga daba yimid" mana cadda waxa uu ula jeedo.
Madaxweynaha ayaa hadalkaas ka jeediyay xaflad shidaalka loogu dabaaldagayay oo magaalada Qabridahar ka dhacday.
Hoos ka daawo muuqaalkaas.
Posted at 7:40 3 Jul
Askar reer El Selvador ah oo loo haysto awoodo xad dhaaf ah
Sagaal askari oo reer El selvador ah ayaa dacwad lagu soo oogay iyaga oo ku eedaysan in ay dileen afar ruux looga shakiyay in ay budhcad ka mid ahaayeen, intii uu socday hawlgal ay fuliyeen labo sano ka hor.
Marka laga hadlayo taariikhda dhaw ee dalkaasna waxaa lagayaabaa in ay noqdaan booliiskii u horreeyay ee lagu xukumo dambiyo la xiriira in ay awood xad dhaaf ah adeegsadeen.
Posted at 7:34 3 Jul
Madaxweynaha la doortay ee Mexico Andrés Manuel López Obrador iyo madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump ayaa khadka taleefanka ku wada hadlay ka dib markii murashaxan siyaasaddiisu ay garabka bidix tahay uu ku guulaystay doorashadii madaxweynenimada ee dalka Mexico Axaddii.
Madaxweynaha la doortay ayaa sheegay in isaga iyo madaxweynaha Maraykanka ay ka wada hadleen heshiisyo wax ku ool ah oo dhanka horumarka ah.
Trump ayaa mar hore sheegay in uu rajaynayo in uu la shaqeeyo López Obrador.
Murannada ganacsiga iyo soogalootiga la xiriira ayaa aad u xumeeyay xiriirkii Maraykanka iyo Mexico.
López Obrador oo 64 jir ah ayaa Twitter uu soo qoray Isniintii ku sheegay in ay wada hadleen bar saac, wuxuu intaas ku daray “in uu u soo bandhigay heshiisyo hormarineed oo shaqo abuur ka samayn doona Mexico, arrintaasna ay dhimi doonto soo galootiga isla markaasna hagaajin doonto ammaanka”.
Wuxuu sheegay “in ay si xushmad leh” u wada hadleen, horayna wuxuu ugu baaqay in ay maraykanka la yeelan doonaan xiriir “is ixtiraamid ku dhisan”.
Posted at 7:32 3 Jul
Qaliin isha bu'deeda lagu samaynayo oo Hargaysa laga hirgaliyay
Sida ay sheegeen mas'uuliyiin ka tirsan isbitaalka indhaha ee magaalada Hargeysa, waxaa markii ugu horreeyay lagu sameeyay qalliin ay dhakhaatiirtu kaga beddeleen dad bukaan ahaa isha wilkeeda ama bu'deeda, oo ay u geliyeen wilka isha qof kale oo dhintay .
Haddaba qaliinkan iyo dad gaadhaya ilaa todoba qof oo lagu guuleystay in loo geliyo il qof kale laga soo saaray intii aanu dhiman, oo weliba laga keenay dalka Mareykanka, ayaa ayaan ka wareysanay Dr. Maxamuud Axmed Maxamed (Shiine) oo ka mid ah dhakhaatiirka indhaha ee isbitaalka Menhal ee Hargeysa. Wuxuu u waramay weriyaha BBC ee hargeysa Axmed Saciid Cige
Liifaaqan dhagsii si aad u dhagaysato waraysiga.
Posted at 7:27 3 Jul
Kulanti wanaagsan kuna soo dhawaada tabinteenna tooska ah, waa maalin Talaado ah oo ay taariikhdu tahay 03 bisha Luulyo 2018ka.